Lionel Messi Oo Saxiixa Antoine Griezmann Ka Door Bidaya Xidig 150 Milyan Lagu Qiimaynayo Oo Premier League Ka Ciyaara. - Gool24.Net
Lionel Messi Oo Saxiixa Antoine Griezmann Ka Door Bidaya Xidig 150 Milyan Lagu Qiimaynayo Oo Premier League Ka Ciyaara.
Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayay wararku sheegayaan in uu maamulka kooxdiisa tallo ahaan ku siiyay in ayna la soo saxiixan Antoine Griezmann.
Barcelona ayaa la filayaa in ay markale isku dayi doonto saxiixa Antoine Griezmann kadib markii uu si rasmi ah u shaaciyay in uu xagaagan ka baxayo kooxdiisa Atletico Madrid.
Wararka ayaa sheegaya in Lionel Messi uu ku taliyay in halkii ay maamulka kooxdiisu kala soo saxiixan lahayaeen Antoine Griezmann in ay u dhaqaaqaan saxiixa Harry Kane.
Harry Kane ayaa lagu qiimaynayaa ugu yaraan 150 milyan gini iyada oo waliba maamulka Tottenham ayna diyaar u ahayn in ay xidiga reer England iibinayaan balse Messi ayaa la sheegay in uu Antoine Griezmann ka doorbidayo Harry Kane.
Real Madrid ayaa waqti dheer lala xidhiidhinayay saxiixa Harry Kane laakiin qiimaha waalida ah ee ay Tottenham dul dhigtay iyo in ayna wada xaajood diyaar u ahayn ayaa keentay in ayna Madrid guul ka gaadhin saxiixa Kane.
Antoine Griezmann ayaa taageerada jamaahiirta iyo ciyaartoyda Barcelona lumiyay kadib markii uu sanad ka hor go’aan ku gaadhay in uu ka baxay heshiis buuxay oo ay Barca la sii gaadhay waxayna hadda u muuqataa in Griezmann aanu taageero badan ku haysan Camp Nou.
Inkasta talada Lionel Messi ay muhiim u tahay maamulka Barcelona, haddana wali waxaa la filayaa in maamulka Barca ay diyaar u yihiin in ay wada xaajood la galaan wakiilada Antoine Griezmann si ayna arintu sidii sanadkii hore u jiitamin.
Kooxaha Manchester United iyo PSG ayaa Barcelona kula tartamaya saxiixa Antoine Griezmann laakiin xidiga reer France ayaa hore loo sheegay in uu ka shalaynayo go’aankii uu sanadkii hore Camp Nou ku diiday.
Dhinaca kale Lionel Messi ayaa la sheegay in uu doonayo in xidigo badan oo kooxda aan saamayn fiican ku lahayn laga diro waxaana liiska ciyaartoydan ku jira Coutinho oo la filayo in Antoine Griezmann uu booskiisa buuxin karo.
Si kastaba ha ahaatee, soo jeedinta Lionel Messi ayaan ahayn mid gabi ahaanba diidan in Antoine Griezmann uu Barcelona ku soo biiro maadaama oo uu sanadkii hore ka mid ahaa ciyaartoydii ololaha ugu jirtay in uu Barca kula soo biiro.